Ny fivoriana lehibe ho an'ny fifandraisana maharitra - Union zen
Ny fivoriana lehibe ho an’ny fifandraisana maharitra — Union zen
Mitady ny hihaona olona tena maimaim-poana iray, nisara-bady na maty vady, toy ny anao? Mitady ny fanahy vady? Tsy hitoetra irery (e) amin ity dingana ity. UNIONZEN mametraka anananao ny mahalala-fomba sy ny taona ny fitantanana ny traikefa ny fanambadiana ny sampan-draharaha ho an’ny fiarahana matotra sy maharitra. Ianao foana no ho raisina amin’ny fahalalam-pomba, ny fahatakaran-javatra sy ny hatsaram-panahy. Amin’ny alalan’ny fanomezana anareo rehetra ny saina, amin’ny fisainana mazava, ary amin’ny ohabolana zen iray aho manao toe-tsaina isika, dia hanampy anao hahita fahasambarana indray. Izahay dia manao ny ezaka rehetra noho ny aminao mba hitsena ny fanahy vady, na inona na inona ny taona. Ny mpanolo-tsaina, dia hihaino sy ny sitrapony hifanaraka amin’ny zavatra ilaina, ny safidinao, ny soso-kevitr’izy ny manokana ny asa sy ny fialam-boly fotoana. UNIONZEN no manolo-tena mba hanome anao ny fanampiana sy ny sofina mihaino mafana sy ny hatsaram-panahy izay nataony rehetra ny vintana eo amin’ny lafiny miaina ny fitiavana, ary farany manao fivoriana manan-danja sy maharitra.
Manahy ianao mba hahazoana antoka fa ny fivoriana dia lehibe, ny mpanolo-tsaina, dia hihaona lehibe olona azo antoka, ary mety: Tsy mifidy sy mihaona ny olona mba isika dia azo antoka fa izy ireo raha ny marina maimaim-poana sy naniry ny fifandraisana maharitra. Mandritra ny fivoriana voalohany amin ‘ny mpanolotsaina, dia hanao toy izany koa, ary hisava any anivon’ ny registrants ho an’ireo izay manana ny tena affinities.
Dia manolotra anao ny fifantenana ny lambam-pandriana toy ny FANOMEZANA
Isika dia manara-maso sy ny ho avy eo hiresaka momba ny fivoriana isan-karazany, mandra-hahita NY marina amin’ny olona iray izay mahazo ny fonao pumping. Inona no mitranga mandritra ny fivoriana? Ahoana no hahitana ny fitiavana ny alalan ny fiarahana amin’ny sampan-draharaha? Ny valim-ny fanontaniana sy ny FIKOJAKOJANA DIA an-TRANO azo atao Fifantenana ny IRAY ihany no Ho MAHARITRA ny FIFANDRAISANA sy MATOTRA ny FIARAHANA azo ANTOKA ny Fisoratana anarana maimaim-POANA MANOKANA Karatra-sary ho toy ny FANOMEZANA FANITARANA maimaim-poana izay azo atao ny FIVORIANA ISAM-BOLANA, fara fahakeliny
← Mampiaraka mampiasa ny tranonkala ny fakan-tsary
Izao tontolo izao ny amin'ny chat roulette →